ओलीकाे प्रश्न- ‘पार्टीले सरकार चलाउने भए किन मन्त्रीपरिषद् चाहियाे ?’
भाद्र १४, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार ठीक ढंगले अघि बढिरहेको बताएका छन्। पत्रकार ऋषि धमलासँग प्राइम टाइम टेलिभिजनमा शनिबार साँझ भएको संवादका क्रममा प्रधानमन्त्रीले यस्तो बताएका हुन्।
‘सरकार ठीक ढंगले चलेको छ। हामी ठीक दिशामा अघि बढिरहेका छौं। कसलाई कतिखेर मन पर्दै त्यो त म भन्‍न सक्दिनँ’, उनले भने, ‘पार्टीमा बाहिर भने जस्तो विवाद थिएन, सरकारलाई कसैले असहयोग गरेको भन्‍ने कुरा पनि होइन।’ उनले प्रधानमन्त्रीले मनपरी गरेको भन्‍ने कुरा गलत भएको बताए।
‘प्रधानमन्त्रीले मनोमानी गर्‍यो भन्‍नेहरुले पहिलो कुरा बुझ्नुपर्छ हाम्रो संसदीय प्रणालीबारेमा’, उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री कार्यकारी हो भन्‍ने कुरा बुझ्‍नुपर्छ। पार्टीले नीतिगतरुपमा सरकार चलाउँछ। तर सीधै हस्तक्षेप गर्ने होइन।’ नेकपाका अध्यक्ष समेत रहेका ओलीले पार्टीले सबै कुरामा हस्तक्षेप गर्ने हो भने मन्त्रिपरिषद्कै आवश्यकता नहुने बताए।
‘पार्टीले नै सबै हस्तक्षेप गर्ने हो भने किन मन्त्रिपरिषद्‍ बनाउनु ? किन प्रधानमन्त्री बनाउनु ? सरकारका नाममा पार्टीकै सचिवालय भए भइगयो नि’, उनले भने, ‘हामीले हाम्रो शासन प्रणाली र सिस्टम बुझ्‍नु आवश्यक छ।’ उनले प्रधानमन्त्री एक हुने र सरकार मन्त्रीपरिषद्ले चलाउने बताए ।
अन्तर्वार्तामा उनले भनेका छन्, ‘प्रधानमन्त्री दुइ जना हुँदैन् । बरु पार्टी अध्यक्ष दुइजना हुन्छ । हामीले सिस्टम र नितिलाइ मान्नुपर्छ । त्यस्तै नेकपाकाे स्थायी कमिटीले अहिले बनाएकाे प्रतिवेदन पास गरेर अहिले समस्या सामाधान नहुँने उनले बताए ।
उनले नेकपामा केही अन्तरविरोध भएको स्वीकारे । ‘यो बीचमा केही अन्तरविरोध भएका हुन्। प्रचण्डजीले केही सन्दर्भमा कुरा उठाउनु भएकै हो। त्यसबाहेक उहाँबाट मैले सहयोग पाएको छु। अब झन् सहयोग बढाएर अघि बढ्ने समझदारी भएको छ’, उनले भने, ‘हामीबीच भागवण्डाको प्रश्‍न नै छैन। भागवण्डाको कुरै होइन। हुँदै जाने, मिल्दै जाने कुरालाई मिलाएर जान्छौं।’
ओलीले आफूले घामजुन रहुन्जेल पदमा बस्छु नभनेको जिकिर गरे। ‘मैले घामजुन रहुन्जेल प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष रहिरहने भनेक छैन। यी पदमा कोही पनि घामजुन रहुन्जेल बस्‍ने कुरा पनि होइन’, उनले भने।। ओलीले पार्टी एक्लै प्रचण्डले चलाउने कुरा पनि सत्य नभएको बताए।